कमेडी च्याम्पियन टप ३ बाट स्याङजाली मेक्सम गौडेल आउट ? – Life Nepali
कमेडी च्याम्पियन टप ३ बाट स्याङजाली मेक्सम गौडेल आउट ?
काठमाडौं । मुलुककै पहिलो हा’स्य रियालिटी शो रियालिटी शो कमेडी च्या’म्पियनको टप– ३ बाट स्या’ङजाली कमेडियन विष्णुप्रसाद गौडेल (मेक्सम) बाहिरिएका, छन् । टप ४ सम्म दमदार प्रस्तुती गर्दै, मौलिकताको, पहिचान बनाएका, गौडेल टप ३ बाट बाहिरिएका हुन । कमेडि ,च्याम्पियनका निर्णायक मनोज, गजुरेलले पोष्ट, गरेको तस्विरमा, उनि देखिएका, छैनन । आउट, हुने सहभागिलाई मन्चमा देखाइने, गरिएको छैन । सेल्फि अफ द इयर क्याप्सन दिएर, गजुरेलले पोष्ट गरेको, फोटोमा, गौडेल देखिएका छैनन ।
जुन तस्विरको कारण दर्शकलाई टप ३ मा को-को पुग्छन भनेर अनुमान गर्न मद्दत पुगेको छ । तस्विरमा प्रतिस्पर्धीहरु सुमन कोइराला, खड्गबहादुर, पुन मगर र हिमेश पन्त मात्रै रहेका छन् । उक्त सेल्फिमा ‘मेलो बाबा’ भनेर चिनिने मेक्सम गौडेल नदेखिएपछि, उनि टपबाट, नै बाहिरिएको, अनुमान लगाइएको छ। ‘कमेडी च्याम्पिएन’ विजेताले २५ लाख नगद र एउटा कार प्राप्त गर्नेछन् ।भोटिङको आधारमा बनेको कार्यक्रममा स्याङजाली, कमेडियन मेक्सम गौडेलले यो हप्ता कम भोट प्राप्त गरेका कारण बाहिरीएकाे बताइएकाे छ ।
शोमा उनी ‘मेलोबाबा’ उपनामले चिनिन्थे । कार्यक्रममा उनले भाइरल बाबा, सेलिब्रेटीको लाइफ स्टायल, टिकट पाउने, नेता जस्ता प्रस्तुति दिएका थिए । हास्यकलाकार, सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, अभिनेत्री ऋचा शर्मा, र चलचित्र, निर्देशक प्रदीप भट्टराई ‘कमेडी च्याम्पियन’ को निर्णायकमा छन् ।अभिनेत्री रिमा विश्कर्माले होस्ट गरिरहेको, ‘कमेडी च्याम्पियन’ लाई विशाल भण्डारीले निर्देशन गरेका छन्।
Previous कपडा लगाएको मान्छेलाई ‘ना’ङ्गै देखाउने क्यामरा’ भन्दै किनबेच गर्ने ४ पक्राउ
Next यस का’रण बल्छ जुनकिरीको पुच्छरमा बत्ती”